အဘယ်ကြောင့် AWS လက်မှတ်ထုတ်ပေးရေးအရေးကြီးပါသလဲ AWS လက်မှတ်ရ Developer တွေလစာ
တစ်ဦး AWS အသိမှတ်ပြုလက်မှတ်များ၏တန်ဖိုးကဘာလဲ?
AWS လက်မှတ်ရ Developer တွေလစာ
AWS လက်မှတ်ထုတ်ပေးရေးဖို့ Path အပေါ်စတင်
AWS လက်မှတ်ရ Solutions ဗိသုကာ - တွဲဘက်အဆင့်
AWS လက်မှတ်ရ Solutions ဗိသုကာ - Professional ကအဆင့်
AWS လက်မှတ်ရ Developer - တွဲဘက်အဆင့်
AWS လက်မှတ်ရ SysOps အုပ်ချုပ်ရေးမှူး - တွဲဘက်
AWS လက်မှတ်ရ DevOps အင်ဂျင်နီယာချုပ် - Professional က (Beta ကို)
ဒါဟာတစ်ဦး AWS အတည်ပြုချက်ကိုဝယ်ယူရန်သင်၏အပေါင်းအဘော်နှင့်စီးပွားရေးအရသိရသည်သင့်ရဲ့ပါဝင်ပတ်သက်မှုအရည်အချင်းပြည့်မှီရန်နှင့် AWS-based application များနှင့်သင်၏အသင်းအဖွဲ့ရဲ့စွမ်းဆောင်နိုင်မှုကိုချဲ့ထွင်ဖို့ထူးခြားသောချဉ်းကပ်ကြောင်းကိုသာမန်သင်ယူမှုပါပဲ။ သို့ရာတွင်မရရှည်လျားလွန်ခဲ့တဲ့၏အဖြစ်တိုင်းတာနိုင်ခြင်းမရှိသေးပေအခြားအားသာချက်ရှိပါတယ်။ အိုင်တီလေး AWS အသိအမှတ်ပြု၏ပုံမှန်လစာ $ 2015 လွန်ကဲအဝတ်မခြုံဘဲ Pro ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကမ္တာ့ဗဟုသုတနဲ့ Windows တို့ကဦးဆောင်သည့် 100,000 အိုင်တီကျွမ်းကျင်မှုနှင့်လစာစစ်တမ်း၏အကြောင်းကိုလာပါတယ်။ ကတိသစ္စာပြုခြောက်ပုံလျော်ကြေးငွေတူညီမအာမခံချက်ရှိစဉ်အခါက, အပြုသဘောမဆိုအပြစ်ပြုလို့မရဘူး။
AWS လက်မှတ်ရ Developer - တွဲဘက်အဆင့် $ 137,825
AWS လက်မှတ်ရ Solutions ဗိသုကာ - Professional ကအဆင့် $ 117,434
AWS လက်မှတ်ရ Solutions ဗိသုကာ - တွဲဘက်အဆင့် $ 114,935
AWS လက်မှတ်ရ SysOps အုပ်ချုပ်ရေးမှူး - တွဲဘက်အဆင့် $ 108,046
ဒါကြောင့်တစ်ဦး AWS ကတိသစ္စာပြုရဖို့ရန်ကြာသောအရာကို ပတ်သက်. 2016 ဆောင်းပါး Perused ။ (အခြား window တွင်ဖွင့်လှစ်)
AWS အတညျပွု (နှင့်ပြင်ဆင်နေ AWS) အစီအစဉ်များဒီဇိုင်နာများ, developer များနှင့်မူဘောင်စစ်ဆင်ရေးကြီးကြပ်မှူးများအတွက်ရည်ရွယ်ပါသည်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို အခြေခံ. စီမံကိန်းများကိုဖြစ်ကြသည်။ တိုင်းအစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အတွင်းတွင်မိတ်ဖက်များနှင့်ကျွမ်းကျင်သူအဆင့်အထိအတည်ပြုချက်သွင်ပြင်လက္ခဏာရှိပါသည်။ ပြင်ဆင်နေကတိသစ္စာပြုစာမေးပွဲဖြေဆိုကြိုးစားရှေ့မလိုအပ်နေချိန်မှာ, ကအတော်လေးအကြံပြုသည်။
ဤသည်ကတိသစ္စာပြုသငျသညျလကျ-အပေါ်သည်းခံနှင့်စွယ်စုံဖြန့်ဝေမူဘောင်အပြစ်တင်, အတော်လေးသုံးစွဲနိုင်, ကုန်ကျစရိတ်-ထိရောက်သောစီစဉ်ဖို့ AWS အသုံးချဖို့အတွေ့အကြုံကိုရှိသည်အတည်ပြုပေးခဲ့သည်။ ဒါဟာခွဲခြားကာ AWS-based application များအတွက်လိုအပ်ချက်တို့၏သွင်ပြင်လက္ခဏာများနှင့် AWS စင်ပေါ်မှာလုံလုံခြုံခြုံနဲ့အစိုင်အခဲ applications များတည်ဆောက်ခြင်းတို့အတွက်ပြီးနောက်လက်ခံခဲ့သည်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများယူရန်သင့်စွမ်းရည်ခိုင်မာသွား။
သတ်မှတ်ထားသောပြင်ဆင်နေ: AWS အပေါ် Architecting
ဤသည်အတည်ပြုခြင်း propelled အထူးပြုကျွမ်းကျင်မှုစွမ်းရည်နှင့် AWS ဇာတ်စင်ပေါ်တွင်ဖြန့်ဝေ applications များနှင့်မူဘောင်ရှင်းလင်းအတွက်ပါဝင်ပတ်သက်မှုအတည်ပြုပေးခဲ့သည်။
အဆင့်မြင့်ဗိသုကာ AWS အပေါ်: ပြင်ဆင်နေသတ်မှတ်ထားသော
ဤသည်အသိအမှတ်ပြုဖွံ့ဖြိုးဆဲနှင့် AWS ဇာတ်စင်ပေါ်တွင် applications များတက်စောင့်ရှောက်ခြင်း၌သင်တို့၏အထူးပြုစွမ်းရည်ကိုအတည်ပြုပေးခဲ့သည်။ စာမေးပွဲဖြေဆိုပူးတွဲပါစိတ်ကူးများသို့သင့်ရဲ့ထိုးထွင်းသိမြင်စမ်းသပ်:
လျှောက်လွှာများအတွက်အခွင့်ထူး AWS န်ဆောင်မှုကောက်နေ။
သင့် application ကနေ AWS န်ဆောင်မှုများနှင့်အတူဆက်သွယ်ဖို့ AWS SDKs အသုံးချဖို့။
သင်၏လျှောက်လွှာအလုပ်အကိုင် AWS န်ဆောင်မှုများ၏ကွပ်မျက်တိုးတက်ကြောင်းကုဒ်ရေးသား။
(ဒါကြောင့်ထွက် IAM အစိတ်အပိုင်းများ, အောင်လက်မှတ်များထုတ်ပေးရန်, encryption ကိုနှင့်။ ) Code ကို-Level application ကိုလုံခြုံရေး
ပြင်ဆင်နေအကြံပြု: AWS အပေါ် Developing
ဤသည်ကတိသစ္စာပြုအလုပ်လုပ်ကိုင်ခြင်းနှင့် AWS အပေါ် running မူဘောင်တက်စောင့်ရှောက်ခြင်း, သင့်အတွေ့အကြုံကိုစီမံလုပ်ကိုင်မှုကိုအတည်ပြုပေးခဲ့သည်။ ဒါဟာထုတ်လုပ်သောနှင့် AWS အပေါ်အလုပ်လုပ်ခဲ့ခံရမှုအတွက်အဖြေရဲ့အနှစ်သာရကမှလိုအပ်ချက်ခွဲခြားနှင့်စုဝေးရန်သင့်စွမ်းရည်ခိုင်မာသွား။ ဒါဟာထိုနည်းတူ AWS စစ်ဆင်ရေးများနှင့်အစီအစဉ်ဦးတည်ချက်ပေးအပေါင်းတို့နှင့်တကွတစ်အကျိုးတူ၏ဘဝမှတ်တိုင်သံသရာစက်ဝိုင်းကတဆင့်အကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်သတ်မှတ်ရန်သင့်စွမ်းရည်အတည်ပြုပေးခဲ့သည်။
AWS အပေါ်စနစ်များစစ်ဆင်ရေး: ပြင်ဆင်နေသတ်မှတ်ထားသော
ဤသည်အသိအမှတ်ပြုသည့် AWS ဇာတ်စင်ပေါ်တွင်ဖြန့်ဝေ application ကိုမူဘောင်အလုပ်လုပ်ခြင်းနှင့်ကြီးကြပ်, ယာယီနေရာချထားအတွက်အထူးပြုကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်စွာအတည်ပြုပေးခဲ့သည်။
System ကိုစစ်ဆင်ရေး AWS အပေါ်: ပြင်ဆင်နေသတ်မှတ်ထားသော
သငျသညျရိုးရှင်းစွာ AWS နှင့်အတူစတင်နေကြသည်သောချွတ်အခွင့်အလမ်းတွင်, သင်၏ခြေစိုစွတ်သောရဖို့တစ်ဦးမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ချဉ်းကပ်မှုစစ်တမ်းအားဖြင့် AWS site ပေါ်တွင်သုံးစွဲနိုင်အခမဲ့သင်ကြားပို့ချအသံသွင်းခြင်းနှင့်ဓာတ်ခွဲခန်းများဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ AWS သင်တန်းထိုနည်းတူသင်တစ်ဦးကတိသစ္စာပြုလမ်းပေါ်ထွက်ခွာရှေ့ AWS ၏ rudiments အတွက်ယူကူညီပေးပါမည် Essentials ။